Global Voices teny Malagasy » Shily : Firehetan’ny Valanjavaboarim-pirenena Ao Torres del Paine Niteraka Fahatafintohinana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Janoary 2012 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Rivera Nandika (fr) i Noele Belluard-Blondel, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Tsidika, Voina
Hatramin'ny 29 desambra 2011 ny Twitter dia tototry ny hafatra milaza firehetana mahatsiravina tao amin'ny valanjavaboarim-pirenena Torres del Paine , izay nambaran'ny UNESCO fa tahirim-bakoky ny “Biosphère” ary iray amin'ireo toerana mahasarika be indrindra ireo mpizahatany ao Chili. Ny iray isan'ny voalohany niresaka io firehetana io dia ilay mpanao gazety Gonzalo Ramírez (@tvn_gonzalo ):
Vaovao ratsy avy any amin'ny valanjavaboary Torres del Paine. 1500 hektara no efa ravan'ny afo tsy voafehy.
Ity loza mhatsiravina ity dia niteraka fahatohinana tany anatin'ireo tambajotra sosialy teo amin'ireo Shiliana mpiondana aterineto izay naneho ny ahiahy, ny hatezerana, ny alahelo ary ny fanantenan-dry zareo ny mba hifehezana haingana izany firehetana izany. Ny lohahevitra nironana betsaka, “Torres del Paine” sy ny tenifototra #salvemostorresdelpaine (ndeha hamonjy an'i Torres del Paine), dia nampiasaina mba ho fampahafantarana sy handefasana ireo fanehoan-kevitra mikasika ilay firehetana.
Efa naharitra 4 andro sahady ilay firehetana ary 11.000 hektara (tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity) no efa kila hotohoto, izay mifanahantsahana amin'ny habenà kianja filalaovana baolina kitra miisa 21.000 araka ny anazavan'ny kisary  avy amin'y vondrom-piarahamonina anaty aterineto Sentidos Comunes. Etsy ankilany, ny talen'ny ONEMI  (Biraom-pirenena misahana ny vonjy taitra – Ministeran'ny atitany), Vicente Nuñez, dia nanindry tamin'ny 30 desambra fa :
“Miatrika toe-draharaha faran'izay saro-bahana isika izao, amin'ny endriny faran'izay sarotra, indrindra indrindra fa noho ny toerana ara-bohontany misy azy, ny rivotra mahery mitsoka ary ny toetoetry ny zava-maniry izay tena mora mirehitra tokoa.”
Marobe ireo fampahalalam-baovaon'olon-tsotra nanangona fanehoan-kevitra, isan'izany ny gazety anaty aterineto El Dinamo izay nanokatra pejy iray Storify  mba hamondronana ireo sary azo momba ilay firehetana ka navoakan'ireo mpampiasa ny Twitter. Ao amin'ny YouTube, Reggaetonmusicfull  dia naneho koa ity lahatsary ity izay noraketina nandritra ny famindran-toerana azy hiala ny valanjavaboary.
Teny anivon'ireo mpampiasa aterineto, nitombo miandàlana ny alahelo miharo hatezerana arakaraky ny nandrosoan'ny fotoana sy tsy nahitàna fandrindràna mazava avy amin'ireo manampahefana, na ny tsy fandrakofan'ireo mpampahalàla vaovao ngezalahy ireny doroala ireny.
Ilay mpanao gazetin'ny Magellan, Simón Borić Font (@sboric ), dia nampahatsiahy ilay lozam-piaramanidina  nahafatesana olona 21 tamin'ny Septambra 2011 tany amin'ny tangoro-nosy Juan Ferández :
Tany Juan Fernández, nandefa sambo 3 ry zareo, fiaramanidina 15 ary vatan-dehilahy maherin'ny 500. Aty Torres de Paine , miaramila Shiliana 25 sy ARZANTINA 23 (avy amin'ny nosy Chauque)
Luis Mariano Rendón, mpandrindra ny Acción Ecológica (Action écologique), ONG iray fantatra amin'ny fanoherany ny HidroAysén *, dia nanambara tanaty fanambaràna iray izay naverin'ireo mpampahalala vaovao maro  tety anivon'ny aterineto hoe :
“Mba tianay ho hita loatra io governemanta io, izay vonona sy kinga lalandava ny hanondraka rano ny vahoaka isaky ny mitolona ho an'ny zony izy ireo, mba ho kinga ihany koa hanondraka rano ireo afo izay mandevona ny tahiry voajanaharintsika.”
Mpianatra momba iray amin'ny sampana “psychologie” ary mipetraka any akaikin'i Punta Arenas, Luis Sandoval Pérez (@orpheoslira ), no nanipika an'ity :
Ireo mpampiasa Twitter no hany mpampahalala vaovao ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, hafahafa an. Marefo ry zareo media. #salvemostorresdelpaine (sauvons Torres del Paine) 
Ny hafa mampahatsiahy fa tamin'ny 2005 dia efa nisy firehetana sahala amin'izao, ary tsy nisy fepetra noraisina mihitsy mba hanatsaràna ny fiarovana ilay faritra sady zàra raha nisy famaizana azon'ireo tompon'antoka tamin'izany. Ilay mpanao sary Marcial Barría (@marcialbarria ) dia nitaraina hoe :
Raha ny fahitàna azy aloha… Tsy voatàna ny lesona nentin'ny fahamaizana tamin'ny 2005 tao amin'ilay valanjavaboary.
Ilay mpibitsika malaza @elquenoaporta  dia nanao ity fanamarihana ity:
Nanao soratra tamin'ny loko ireo mpiazahatany ao Cusco : nosamborina ry zareo. Tamin'ny 2005 dia mpizahatany iray no nahatonga ny firehetan'ny 17.000 hektara tamin'ny valanjavaboarin'i Torres del Paine: sazy ara-bola 120 000 $ no nasaina tsy maintsy naloany. #asinosepuede  (izay no izy)
Sary avy amin'ilay mpampiasa Twitter @IvanGomezS, nampiasaina miaraka amin'ny fanomezany alàlana
Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta dia nilaza ilay toerana ho “faritra misy loza mahatsiravina”  , tamin'ny famoahana didy manakatona ilay valanjavaboary mandritra ny volana Janoary manontolo. Ny Filoha dia nangataka ihany koa ny fanampian'ireo firenena hafa toa an'i Etazonia, Aostralia, Arzantina mba hiadiana amin'ny afo.
Ireo vahiny mpizahatany tao anatin'ilay valanjavaboary tamin'ny fotoana nanombohan'izao rehetra izao dia nizara ny fijoroan'izy ireo vavolombelona tao amin'ny aterineto.
Miguel Angel Guevara , mpanoratra iray ato amin'ny Global Voices, dia nitantara tamin'ny alàlan'ny hafatra elektronika :
Tao amin'ny Torres del Paine indrindra aho raha iny ry zareo nanomboka namoaka anay iny, avy any Puerto Natales aho no niditra omaly, be ny vaovao miampitampita aty an-tanàna, indrindra fa ny honohono samihafa. […] Haingana loatra ny fivoaran'ny raharaha, roa andro izay no nandrenesanay momba ilay firehetana fony izahay tao amin'ny toby nilasian'ny Italiana ary nihevitra izahay fa ho afaka ny ho any amin'ny ranomandry Grey, saingy iny alina iny dia toa fofona fahamaizana no nanomboka heno tao amin'ny valanjavaboary ary ny ampitso, ny mpiambina ny valanjavaboary dia nanaitra anay rehetra nilaza taminay ny tsy maintsy handaozana ny toerana. Dia niala ny toerana izahay, teny am-paratazana, tsy nisy na inona na inona tsinjo intsony, feno setroka, rehefa nanandrana namindra aho, tonga dia te-handoa izany.
Stephanie – The Travel Chica dia namela fanamarihana toy ity tao amin'ny lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe “Chile cries, her beauty burns: Fire in Torres del Paine ” (“Mitomany i Chili, midedaka ny kantony: Afobe ao Torres de Paine”) tao amin'ny bilaogy Matador:
Efa tany aloha no tokony ho nakatona ilay valanjavaboary. Ireo mpitarika izay niditra tao dia efa nahafantatra fa hatramin'ny andro faharoa no efa tsy voafehy intsony ny firehetana. […] Niresaka tamin'olona maro aho, izay nandao ny valanjavaboary, ary ireo dia niteny tamiko fa tsy nisy fampahafantarana natao azy ireo kanefa dia efa ora maro no niandrsan-dry zareo izany, nitazana ny setroka sy ny afo tamy nanatona. Nisy tamin'izy ireo aza no mbola nasaina nandoa vola indray mba hahafahana mitondra azy ireo tamin'ny sambo mpitondra mpizahatanin'ny farihy Grey. […]
Claudia Saunders, vehivavy iray bilaogera, izay tany Torres del Paine koa tamin'ny fotoana nanombohan'ny firehetana ary taorian'ny nanesorana an-dry zareo, dia nampakatra tao amin'ny bilaoginy antso iray mba hihetsehana [teny anglisy] izay mampita ny akon'ny fihetsehampo sy ny fanantenan'ireo rehetra izay manaraka akaiky ny zava-mitranga :
Fo feno sy alahelo anaty lalin'ny fanahy no entiko manoratra ity lahatsoratra ity. An-dalam-pirehetana i Torres del Paine izao. Vokatry ny asan'ireo tsy mahatsiaro ho tompon'andraikitra, tia tena sy kaondrana. Tsy azo anaovana afo ao anatin'ny valanjavaboary, iray amin'ireo fepetra vitsy misy mba hiarovana io faritra mahavariana io izany. Izay rehetra tonga eto dia samy mahafantatra ny antony : faran'izay mahery vaika be ny rivotra aty Patagonie. Saingy vondron'olona iray no nihevitra fa tsy mihatra amin'izy ireo izany fepetra izany. Tanaty fifangaroanà fahaverezan-toky sy hatezerana, tsinjoko ireo setroka miloko mena sy mainty niparitaka sy nameno lavenona ny lemaka…ary dia nitomany aho. […]
[…] Mangataka anareo rehetra aho mba samy handray ny andraikitrareo avy, mba samy hisaina izay hampandry fahalemana ary ny fahasambaran'ireo rehetra izay nikoropaka nihazakazaka handeha hamono ny afo ka hivavaka mba ho tsara sy ho haingana ny hivahàn'izao rehetra izao.
Nahita tanora maro aho, miaramila, mpiadidy ny ala, “gauchos” (Avy amin'ny mpandika : mpiandry omby mitaingin-tsoavaly) sy mpitarika mpizahatany, namela ny zavatra rehetra any aorian-dry zareo, ary tanatin'ny indray mipi-maso dia efa teny ambony soavaly, nandeha an-tongotra, fiara na nandeha sambo mba hanatona akaiky ilay firehetana sy hiady aminy. Fonenan-dry zareo io. Harenan'izy ireo. Fombam-piainany ary mitolona mba hanavotana azy ry zareo.
Sary an'ilay mpampiasa Flickr Nekane Ortega Albarran (NoaPhoto) (CC BY-NC 2.0)
Fisaorana ho an'i Silvia Viñas  sy Felipe Cordero  tamin'ny fiaraha-miasa nanoratàna ity lahatsoratra ity.
*Fanamarihan'ny mpandika :
HydroAysen: Tetikasa Shiliana ho fananganana tohodrano 5 hamokarana herinaratra ao Patagonie
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/04/27125/
 Torres del Paine: http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Torres_del_Paine
 dia nanindry tamin'ny 30 desambra fa : http://www.eldinamo.cl/2011/12/30/incendio-en-torres-del-paine-activa-alarma-en-la-moneda-tras-arrasar-con-5-mil-700-hectareas/
 ilay lozam-piaramanidina: https://es.globalvoicesonline.org/2011/09/04/chile-cibernautas-rinden-tributo-a-fallecidos-en-accidente-aereo/
 naverin'ireo mpampahalala vaovao maro: http://www.cooperativa.cl/incendio-en-torres-del-paine-ambientalistas-criticaron-reaccion-del-gobierno/prontus_nots/2011-12-30/110723.html#relato8
 #salvemostorresdelpaine (sauvons Torres del Paine) : http://twitter.com/#!/search?q=%23salvemostorresdelpaine
 dia nilaza ilay toerana ho “faritra misy loza mahatsiravina” : http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/12/30/519446/zona-de-catastrofe-en-localidad-afectada-por-incendio-en-torres-del-paine.html
 Chile cries, her beauty burns: Fire in Torres del Paine: http://matadornetwork.com/trips/chile-cries-her-beauty-burns-fire-in-torres-del-paine/
 antso iray mba hihetsehana: http://claudiasaunders.blogspot.com/2011/12/call-to-action.html#comment-form